05 April 13- Fante Online
Friday Sermon: Building Mosques, Unity and Accord - 05th April 2013 - Fante Online
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 5, 2013.
(Friday sermon – 5th April, 2013 – Fante Translation)
ASƆRDAN NE NSISII; NKABƆMU ƆNYE ADWENKOR.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa ne Fida Nyamesɛmka no wͻ Baitur Rahman asͻrfi no a ͻwͻ Valencia Spainman mu no. Ɔkenkaan Kuran mu nsɛm a ͻtoatoa do yi dze hyɛɛ ase:
“Na hom nyina nka mbͻ mu nsuo Allah ahoma no mu dzendzeendzen na mma hom mpaapae hom mu na hom nkae Nyankopͻn adom no a Ɔdze egu hom do ber a nna hom yɛ atamfo ma hom ho no. Ɔno na Ɔkaa hom akoma bͻͻ mu wͻ ͻdͻ mu, na N’adom ntsi hom bɛyɛ dɛ enuanom na nna hom wͻ ogya amona ano pɛɛ na Ɔno na Otwitwae gyee hom fiir ho. Dɛm kwan yi do na Nyankopͻn kyerɛkyerɛ ne mbransɛm mu kyerɛ hom, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma hom enya kwankyerɛ. Na hom mma nyimpakuw bi ntsena hom mu a hͻn dwumadzi nye dɛ wͻbɛfrɛ nyimpa akͻ papa ho na wͻakyerɛkyerɛ ndzepa na wͻabra bͻnyɛ. Na woyinom na wobedzi kunyim (Sura Ale Imran 3:104-105).
“Fa nyansa na afotu pa frɛ nyimpa kͻ wo Ewuradze kwan do, na fa kwan pa a oyie do nye hͻn nyɛɛ mpɛnsampɛnsamu. Ampaara wo Ewuradze no nyim nyia wͻayew efi No kwan do; na Onyim hͻn so a wͻwͻ kwankyerɛ no mu (Sura Al Nahl 16:126)
Nyankopͻn N’adom ara Fida yi a etwa mu kͻ no wobuei Asͻrfi a ͻtͻdo ebien wͻ Spainman mu. Jama’at no, hͻn enyi gyee dodow ma wͻda hoara hͻn enyi gye. Ndɛ ndaawͻtwe, Hadhrat Khalifatul Masih gyinaa Asͻrdan fofor yi do kasae na ͻpɛɛ dɛ ͻtwe adwen gyina ndzɛmba bi so do. “Anohoba Messiah (ANN) kaa dɛ: mber bi mu hɛn Kuw yi hiaa dɛ wobesisi asͻrfi pii. Asͻrfi yɛ Nyankopͻn ne fie. Kurow anaa nkurowba a woesi asͻrfi wͻ mu biara, dwen hu dɛ Kuw yi no mpontu fapem nna wͻatow no wͻ hͻ no. Sɛ kurow anaa kurowba bi wͻ hͻ na Muslimfo kumaabi anaa binom nnyi hͻ mpo a na wohia Islam mpontu wͻ hͻ a, ͻwͻ dɛ wosi asͻrfi wͻ hͻ. Nyankopͻn noara bͻtwe Muslim dͻmakͻ ho. Mbom dza ͻwͻ dɛ ͻyɛ nye dɛ wͻdze nokwardzi besi ma aba no dɛ Nyankopͻn ntsi na wͻama dan no do esi hͻ no. Ɔnnkɛba no dɛ wͻdze pɛsɛmankonya anaa adwen bͻn bi no, Nyankopͻn behyira Asͻrfi no”.
Dɛm asɛmpͻw yi wͻabͻ no dawur mpɛn pii dadaw, mbom kasapͻw pii wͻ mu a Ahmadiyyafo wͻ dɛ wͻdwen ho. Dza odzi kan a ͻbͻ dzin nye dɛ, asͻrfi (mosque) yɛ Nyankopͻn dze. Nyankopͻn N’adom ara ntsi Ahmadiyyanyi biara gye Nyankopͻn dzi; dɛm gyedzi yi wͻ dze atwe adwen gyina enyimnyam a Nyankopͻn Ne Dan wͻ ͻnye akwan a yebodua do ma dͻm akͻ mu. Sɛ yɛtwe hɛn adwen egyina iyi do, ͻnam Nyankopͻn Nabͻdze hͻn yieyɛ do; hͻn a ampaara wohia dɛ yɛkyerɛ hɛn dͻ na papa ma hͻn. Dɛm ntsi, Anohoba Messiah (ANN) kasaa faa asͻrfi ho dɛ: Dͻm a wͻwͻ kuw yi mu nyɛ patambͻmu nyɛ ͻdodow asͻr wͻ asͻrfi yi mu. Nhyira pii wͻ ͻdodow asͻryɛ na ntseasee mu. Nkyikyɛmu dze nkekaawa ba, na dɛm mber yi nye ber a ͻwͻ dɛ yɛper papaapa ma nkabͻmu na ntseasee. Ɔwͻ dɛ yeyi nsɛm a ͻdze nkekaawa ba nyinara akwa.
Dɛm dza, asͻrfi yɛ Nyankopͻn Ne fie ntsi Ahmadiyyafo a wͻwͻ ntabakamu ha yi (Valencia) wͻ dɛ wͻhyɛ ͻdodow asͻr mã na wͻma ͻdͻ na ntseasee gyina. Anohoba Messiah (ANN) kaa dɛm asɛm yi mfe ͻha awͻtwe (108) a etwa mu kͻ no, mbom nna noara retsetse n’esuafo no wͻ sunsum na tseneneeyɛ mu. Sɛ yɛdze hͻn to ndɛ ber yi dze ho a, nna ͻkrͻn ara yie. Nokwar wonyaa Nyankopͻn No ho suro mapa na hͻn adwen wͻ Salat ho dze, wͻto no abaw a onnhyia. Ampaara dɛ, hͻn a wͻgyee Anohoba Messiah (ANN) too mu no wͻnye Nyankopͻn nyaa nkitahodzi soronko. Eso, ͻyɛ Nyankopͻn Ne Nkͻnhyɛnyi n’edwuma dɛ ͻkyerɛ Nyankopͻn ho suro pefee na ͻkyerɛ nkorͻfo kwan. Dɛm ntsi na ͻtwee n’esuafo no hͻn adwen gyinaa dɛm nsɛm yi do. Ɔyɛɛ no ehiadze dɛ, sɛ ahyɛse noara wͻamma Nyamesom enndzi adͻntsen a, akaekyir mba nnkenya fasusu aaka do.
Hadhrat Khalifatul Masih daa no edzi dɛ Anohoba Messiah (ANN) no n’esuafo ho nsɛm pii ͻahyɛ ase reka no wͻ ne Fida Nyamesɛmka da ho tͻ sin. Esuafo no hͻn ho nsɛm pii wͻ hͻ a ͻannka, na ma wͻkaa no so yɛ tsiabaa bi. Naaso, wͻatwa hͻn ndzeyɛɛpa ho mfonyin a ͻtwe dͻm hͻn adwen gyina do dɛ wͻbͻbͻ mpaa ama hͻn. Sɛ Anohoba Messiah (ANN) no n’esuafo no mu bi hͻn ebusuafo wͻ Valencia ha a ͻno wͻmbͻ mpaa mma hͻn mpanyimfo. Ampaara dwumadzi pii wͻ hͻ a ͻwͻ dɛ wͻyɛ no wͻ ͻman yi mu. Enyimnyam a wͻayew no mfe santsen no wͻ dɛ wͻdze ne nan si famu bio na wͻaboaboa dͻm ano dze hͻn kɛhyɛ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne ntamadan no ase. Iyi ne nyɛe gye nkankaara dɛ wͻbͻsom Nyankopͻn dza ͻtoa do nye Nsɛmpatrɛ dwumadzi Kuw no yɛ pampamsoumu dze dzi.
Yɛada dza ͻso papaapa edzi wͻ ͻman yi mu; dɛm ntsi, odzi kan no, ͻwͻ dɛ yɛdze supa hɛnhɛn hɛn mu. Sɛ banodzifo ͻnye Jama’at enngyina wͻ koryɛ mu a ͻno nna dza oyie ma Nyankopͻn Ne dan no wͻrennhyɛ no ma. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ, o’eedzi kan aka no dadaw dɛ asͻrdan n’ahoͻfɛw da edzi pefee wͻ ber a hͻn a wͻba asͻrfi no mu no hͻn sunsum mu ahoͻfɛw da edzi pefee., ber a hͻn onuadͻ na ntseasee da edzi pefee. Kuran akenkansɛm a odzi kan no, ampaara ͻfrɛfrɛ onuadͻ na ͻtwe hͻn adwen gyina dɛ Nyankopͻn N’enyimpa kɛkɛ nna ͻaka hɛn abͻmu ayɛ hɛn kor. Gyedzinyi biara wͻ dɛ ͻdwen ahyɛdze biara ho na kwankyerɛ biara no ofir Nyankopͻn hͻ.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ obiara nnyi hͻ a woyi no fi Nyankpͻn Ne mbransɛm ho; ͻdasanyi biara wonnyi no mmfi mu, ͻwo a ewͻ gyinabew wͻ Jama’at no mu o, asɛmpakakyerɛfo a ewͻ Jama’at no mu o, na Ahmadiyyafo mbaa na mbanyin nyiara. Susuampaara a yeesuo ‘Allah N’ahoma’ no mu petsee yi dze, yɛdze Kuran Krͻnkrͻn no mu mbransɛm no bedzi dwuma na yɛakaakaa Nyankopͻn N’enyimpa dɛ Ɔayɛ hɛn Ahmadiyyafo, yebotua Ɔno na Ne dan no ho ntoboa. Susuampaara yɛdze Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne nkyerɛkyerɛ ͻnye nyia o’etu no ho ama no a ͻyɛ Anohoba Messiah (ANN) yi dze, nna yeridzi Nyankopͻn N’enyimpa a Ɔdze akyerɛ hɛn no do. Dɛ mbrɛ yɛahyɛ bͻ ama Khalifa a ͻwͻ do yin a yɛbɛwͻw do dze n’enumsɛm akͻ nyɛe mu yi, yɛdze ndaase bɛma Nyankopͻn wͻ dɛ O’ehyira hɛn.
Ɔwͻ dɛ yɛkae dɛ, Kuran Krͻnkrͻn, Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN), Anohoba Messiah (ANN) na Khilafat-e Ahmadiyya nyiara yɛ “Allah N’ahoma”. Obiara a o’emmbu hͻn mu kor biara nna tserɛ ͻrebɛn ogya amona no bio. Dɛ ibɛkitsa Nyankopͻn N’ahoma no mu dzen na akaakaa Nyankopͻn N’enyimpa no bɛkyerɛ dɛ edze anomunsɛm rokͻ nyɛe mu. Onuadͻ, ntseasee na nkitahodzi bɛma Ahmadiyyafo ayɛ nkorͻfo a woenya akwankyerɛ na wͻka hͻn a wͻetwitwa agye hͻn efi ogya amona no mu. Ahmadiyyafo anokwafo no yi hͻnho fi ndzeyɛɛ basabasa nyinara ho na wͻadodͻ hͻnho nkorkor ama Nyankopͻn N’enyi agye hͻn ho. Hͻn a wodzi hͻn nsɛm na hͻn ndzeyɛɛ wͻ dɛm kwan yi do no, hͻn tsir ayɛ yie. Iyi na ͻbɛma yeetum atwe dͻm, sɛ yɛwͻ dɛm tsebea yi mu a.
Ndɛ mber yi nyinara dodowara atwe hͻn ho efi som ho na nkorͻfo pii a wͻwͻ Aborͻkyir anee afamu nngye nndzi dɛ Nyankopͻn wͻ hͻ. Mbom, nkorͻfo twe bɛn som ho wͻ Spain. Wͻtoo pon maa Spainfo wͻ Valencia ndɛ ndansa. Opanyin a ͻda Valencia Mbrahyɛ Nhyaimu ano baa aponto no ase bi na ber a ͻrotwetwe nkͻmbͻ no ͻkyerɛɛ n’adwen dɛ nkorͻfo ropow Nyamesom na ͻwͻ dɛ wͻtwe hͻn san ba ho.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ opanyin no ne saso mba a ͻnye hͻn edzi ehyia wͻ Aborͻkyir anee afamu no ͻno nko na ͻakyerɛ n’adwen wͻ Nyamesom ho. Nyankopͻn dze ato gua dɛ Islam nye nokwar som no, ntsi Nyamesom biara nnyi hͻ a obotum dze nyimpa abɛn Nyankopͻn ho; Nyamesom biara nnyi hͻ a obotum enya ahͻodzen ayɛ dɛm. Na hͻn a hͻn asodzi nye dɛ wͻbͻtow Islam apetse na hͻn a wͻdze ‘Nyankopͻn N’ahoma’ ehyira hͻn no nye Ahmadiyyafo ampaara. Sɛ yɛsɛe hɛn nkabͻmu na yɛkyekyɛ hɛn mu a, ampaara dɛ yebeyi ano wͻ Nyankopͻn enyim. Wͻkaa no Fida a abɛsen no ne Nyamesɛmka ase dɛ, amamfo mpempem a hͻn nananom yɛɛ Muslimfo resan ba Islam mu bio. Mbom wonnyim nokwar Islam no. Ɔwͻ dɛ yɛma wohu. Europeman mu Ahmadiyyafo pii gyee Islam too mu ber a wonyaa sunsum mu nkenyan no na mbom Asͻr mu nwomahufo (Ulema) no anngye hͻn taataa wͻ hͻn sunsum mu nkenyan ho. Nkorͻfo no hwehwɛɛ mu yie na afei wͻgyee Ahmadiyya Kuw no too mu. Ahmadiyyanyi biara wͻ dɛ ohu dɛ obiara a ͻhɛn Ahmadiyya mu fofor biara nya sunsum mu asomdwee na hͻn a wͻayɛ Ahmadiyya akyɛr no nyɛ mpɛnsampɛnsamu wͻ hͻn abrabͻ mu. Sɛ Ahmadiyyafo a wͻakyɛr wͻ mu no, nkanka hͻn a wofi Pakistan no annyɛ hͻn ahyɛdze a wͻbɛpam nkorͻfo a wͻrohwehwɛ nokwar yi.
Valencia aponto yi a yɛabͻ dzin dadaw yi, Hadhrat Khalifatul Masih kasaa tsiabaa wͻ ase faa Islam nkyerɛkyerɛ ho. Ɔbaa bi a ogu ahatatsir kohuu no ekyir no. N’aboma kyerɛ dɛ ͻyɛ Spainnyi mbom oyii noho kyerɛɛ dɛ ͻyɛ Muslimnyi. Ɔbaa no kaa dɛ wͻnam Islam nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw no do akyerɛ Islam mu yie mapã. Aber a Khalifatul Masih kaa dɛ ͻyɛ dɛ ͻbaa no yɛ Spainnyi no, Maulwi Karam Illahi ne babanyin a nna ͻwͻ aponto no ase no kyerɛɛ mu dɛ ͻyɛ Spainnyi ampa na ͻabͻdͻm Islam. Ewuraba no kaa dɛ ‘ͻnnsesaa’ yɛse ampaara, mbom ͻasan kͻ ne nananom hͻn som no mu. Spainfo pii rohwehwɛ hͻn nananom hͻn som na ͻnye n’ase. Ɔwͻ dɛ yɛyer hɛn ho papaapa dɛm bea yi mu na nkorͻfo no hͻn mu. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ, ͻbɛka mpɛn pii dɛ, dwumadzi yɛrohwehwɛ ma wͻehyira do a, ͻwͻ dɛ yɛsi gyina wͻ Nyankopͻn Ne mbransɛm do. Anohoba Messiah (ANN) no kaa dɛ asͻrfi yɛ mpontu kwan mbom ͻkae hͻn bio dɛ botae a wͻdze sii no wͻ dɛ ͻyɛ nokwar.
Ampaara, nokwardzi na nyansa na nyimdzee mbohͻn nyinara nam kyenan kor do; na nokwardzi nye fapem no. Sɛ woyi nkekaawa nyinara akwa a Basharat Asͻrdan (Pedro Abad) na dɛm asͻrfi yi dze nsunsuadopa bɛba. Aponto a wͻyɛɛ no wͻ Valencia no nye Nhyiamu kɛse a odzi kan a Spain Jama’at hyiae wͻ aponto no ase. Fisamenafo, nwomahufo, aban mpanyimfo na amanyɛfo pii baa ase. Hͻn enyi gyee aponto nhyiamu no ho dodow na piinara kaa dɛ da no nye da a odzi kan a wͻtsee Islam nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw no. Piinara kaa dɛ awͻsa guu hͻn. Ampaara, obi a ͻnngye Nyame nndzi a wͻtoo nsa frɛɛ no kaa dɛ o’esua ndzɛmba pii efi Nyamesom ho.
Dr Mansroor kyerɛwee kaa dɛ ne nsɛfo ayɛrsafo (Doctors)no, awͻsa guu hͻn dodow wͻ apontu no ase. Ndɛ, Anohoba Messiah (ANN) n’akakofo nkotsee na wobotum akasa afa gyedzi wͻ Nyankopͻn mu na Nyamesom ne fɛɛfɛw ho, wͻyɛ nkorͻfo a Nyankopͻn aboa hͻn ma woesuo ‘Allah N’ahoma’ no mu dzen. Aponto no, noho nsɛm ara yie wobetsintsim no wͻ nkrataa do dɛ amandzɛɛbͻ na wͻabͻ no dawur wͻ MTA a wͻdze kasafir kyeer dza ͻkͻr do wͻ hͻ nyinara ͻnye nsɛmbisa na nyaano so. Aponto da no nna Ɔkyeame a ͻwͻ Valencia Mbrahyɛ Nhyiamu etu kwan kͻ Madrid a ͻdze dͻnhwir ebien duu hͻ. Biribi sii no ban ma n’asoɛe kaa dɛ onnkotum aba. Mbom Ɔkyeame no tumii baa aponto no ase. Ɔkaa kyerɛ ne hɛnkanyi no dɛ ͻnka hɛn mfi wusiwhɛn gyinabea hͻ nkͻ aponto no ase pɛɛ. N’enyi gyee aponto no ho ͻnam hia a ohia ntsi. Ɔdween dɛ obedzi bɛyɛ dͻnhwer fa naaso ͻkyɛr hͻ kakra. Ɔkaa dɛ Hadhrat Khalifatul Masih akasa afa Islam nkyerɛkyerɛ a ͻyɛ fɛw mapa ho. Dɛmara so na wͻtoo nsa frɛɛ nkorͻfo a wͻyɛ amanyɛfo, mbrahufo, adatserfo na mbrahyɛ nhyiamu mba ka ho. Hͻn a wͻtoo nsa frɛɛ hͻn yɛ ͻha awͻtwe (108). Efisamenafo a nna nkyɛ wotsia hɛn so baa bi. Kasa wͻ aponto no ase gyinaa hͻn a wͻnye Islam da hyia, na kasa yi ekyir no hͻn a hͻn adwen mu yɛ hͻn konsee nyinara nyaa tsigyina. Wiadze rohwɛ hɛn ntsi ͻwͻ dɛ yɛyɛ hɛn ahyɛdze. Ohia dɛ yɛtse hɛn ahyɛdze yi ase.
Akenkansɛm a ͻtͻdo ebien no kyerɛ dɛ: “Na hom mma nyimpa kuw bi ntsena hom mu a wͻbefrɛ nyimpa akͻ papa ho……na wͻabra bͻnyɛ”. Ɔfa iyi ho no, dza odzi adͻntsen nye Jama’at nsɛmpatrɛfo osiandɛ Khalifa a osi do yi ayɛ hͻn n’ananmusifo wͻ dza ͻfa no Taribiyyat na Tabligh ho. Wͻyɛ nsɛmpakafo a wotu nkorͻfo fo. Sɛ ananmusifo yi annyɛ dza ͻsͻ enyi a wͻbɛyɛ dɛn etu nkorͻfo fo. Jama’at hͻn Taribiyyat na Tabligh yɛ hͻn ahyɛdze ntsi wohia egyinanan a ͻyɛ dzen. Ohia so dɛ wonya abotar a ͻyɛ dzen, setsie so a ͻwͻ dɛ eyɛ na enya fi obinom nkyɛn so, da asɛm na ne nyɛe ho. Wͻyɛ Khalifa a osi do yi n’ananmusifo ma Nyamesom na sunsum mu mpontu ma Jama’at na ͻwͻ dɛ wodzi dɛm ahyɛdze yi do. Ber a woridzi dɛm dwuma yi wobehyia nkodzen, ͻnam dɛ wͻyɛ nyimpa ntsi mber bi wͻsͻ hͻn abotar hwɛ kodu n’ano na ntsɛmara wͻndwen nkͻ mpaabͻ mu wͻ dɛm mber yi mu na wonhu dɛ woetu hͻn bra ama Nyankopͻn na ͻwͻ dɛ wͻdze wiadze bɛhyɛ Nkͻnhyɛnyi (NNN) ne ntamadan no ase.
Dɛm ntsi biribiara nnyi hͻ a obi bɛka a obehihim hͻn ma dza ͻda hͻn enyido no hͻn nsa nkɛka. Hͻn bͻhyɛ begyina hͻn na Nyankopͻn No tumdzi nkotsee do na nnyɛ hͻnara hͻn apɛdze bi a. Penkyɛr a wobenya ama edwuma mu banodzifo no bɛma woenya Nyankopͻn ho enyigye osiandɛ nna wͻreyɛ “ͻfrɛ kͻ papayɛ ho” wͻ tsebea biara mu. Nnyɛ dɛ wobotwitwa agye hͻnho wͻ nkekaawa nko ho bi, ͻwͻ dɛ wotwitwa gye wiadze mba fi ho. Okuw a ͻtͻ do ebien a wͻkasa kyerɛ hͻn nye gyinabewdzifo wͻ Jama’at no mu. Hͻn so wͻdze dwumadzi bi ahyɛ hͻn nsa a, wobobu ho nkontaa. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ wodzi nokwar wͻ nsɛmkaa na nyɛe mu na wͻyɛ dza ͻbɛkyerɛ nokwardzi na sompa na wͻama nkorͻfo edzi dɛm ndzeyɛɛ yi ekyir. Sɛ hͻn mfatoho enndzi Jama’at no bano annkͻ tseneneeyɛ ho a, na sɛ hͻn nsɛm na hͻn ndzeyɛɛ bͻ ebira a, nkaafo no bɛka no wͻ hͻn enyim dɛ ͻwͻ dɛ wͻsesa hͻn ndzeyɛɛ, wͻtsen hͻn sunsum mu gyinabew, wͻyɛ hͻn wiadze ndzeyɛɛ yie na wͻdze botooyɛ tahye Jama’at hͻn asɛm no.
Ɔwͻ dɛ wobu asͻfo no a wͻyɛ Khalifa a ͻtsedo yi n’ananmusifo no. Ampaara, edwumamu dzebewdzifo no nye hͻn a ͻwͻ dɛ wodzi kan bu asͻfo no. gyedɛ wobu hͻn nyipmadua nye hͻn su a ͻwͻ hͻn mu, ͻno wonkotum aka dɛ wͻka hͻn a “wͻfrɛ hͻn kͻ papayɛ, na wodzi pɛrpɛr na wohyir bͻn” ho. Edwumamu dzibewdzifo a wͻwͻ Jama’at mu no wͻ dɛ wobu hͻn ho na wͻweͻn hͻnho nkankara Sadr Jama’at na Ameer Jama’at wͻ bea a wͻwͻ biara amma wͻamfa mpaapaamu ammba. Asͻfo hͻn enyidzee ͻwͻ dɛ odzi kan fi Jama’at edzibewdzifo hͻ na afei Ameer Jama’at. Naaso onnyi dɛ wͻfa do dze yɛ hͻn adwen dɛ ͻyɛ hͻn ndzenoa dɛ ͻwͻ dɛ wͻdzi hͻn nyi. Ɔwͻ dɛ wͻbrɛ hͻn ho ase na wͻnya nsakyerpa wͻ hͻn mu. Sɛ yɛtum nya dɛm gyinabew yi wͻ hɛn mu a, hɛn suban pa ho ntsetsee bɛyɛ mberɛw. Na hɛn Tabligh botu mpon ara yie. Koryɛ, enyidzi na asomdwee bɛyɛ nhyira ama hɛn dwumadzi ahorow nyinara.
Hadhrat Khalifatul Masih kyerɛ mu dɛ ͻwͻ dɛ nkitahodzi pa a no mu yɛ dzen bɛda banodzifo nyinara ntamu. Iyi hia osiandɛ ͻnoara bɛma hɛn dwumadzi ayɛ nhyira. Mpaepae mu, pɛsɛmankonya nye ebufuw dze nsunsuando bͻn ba. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ mebɛka asɛm bi a osii ber bi dze akyerɛ iyi mu. Obi dze sombo bi kͻbͻͻ ne nyanko bi wͻ onyimnyamfo bi n’enyim dɛ wͻahyehyɛ no ahoroba. Onyimnyamfo no hyɛɛ ase dɛ ͻreyeyaw dɛm banyan no na nyanko no yɛɛ dziin wͻ n’enyim a wͻantow n’anum. Na onyimnyamfo no bisaa no dɛ ebɛnadze ntsi na mereyeyaw wͻ na ayɛ dziin yi? Ebɛnadze ntsi na ehyehyɛ wͻ nyanko no ahoroba no, obuaa dɛ ͻkaa asɛm bi kyerɛɛ me a m’enyi anngye ho. Na onyimnyamfo no kaa dɛ ennya abotar wͻ no ho osiandɛ w’adwen yɛɛ wͻdɛ ͻyɛ fom fom nyimpa sen wo dɛm ntdi na ennya abotar wͻ no ho no.
Dɛ mbrɛ yesie abotar wͻ hɛn mpanyimfo ho no dɛmara so na ͻwͻ dɛ yesie abotar wͻ hͻn a wͻhyɛ hɛn ase nye hɛn etsipɛnfo ho. Iyi bɛyi wͻntwiwͻntwi na ntawantawa nyinara efi hɛn ntamu. Yɛtu wiadze fo naaso sɛ yɛdze dur hͻ a nna yɛatow abotar nye pintsin gyina egu. Mma hɛn Jama’atfo nnyɛ hͻn adwen dɛ iyi yɛ hͻn a woetu hͻn ho ama no nye banodzifo nkotsee hͻn ahyɛdze. Dɛ yɛbenya ahotͻ ama hɛnho hɛnho na yɛbedzi dza Nyankopͻn na Ne somafo bɛka do na yɛbenya Nyamesuro na yɛbedzi Anohoba Messiah (ANN) no nkyerɛkyerɛ do na yɛabrɛ hɛn ho adze ama Khalifa a ͻtse eguado no. Iyinom enye dɛ yebotum egyina Hadis nyimdzii do ayɛ asɛm mbaabaa mu. Yɛbɛnya kasapͻw a no mu yɛ dzen dze eyiyi nsɛm ano, na ͻwͻ dɛ yɛyɛ nhwehwɛ mu. Hikmah so gyina hͻ ma pɛrpɛr. Onnyi dɛ hɛn nsɛm bɛyɛ ekyingye nko, onnyi dɛ hɛn nsɛm mpɛnsampɛnsamu bɛyɛ patapaa yɛ. Sɛ Muslimfo wͻnnye Ahmadiyyafo enntum enyiyi nsɛm ano a, na wͻdze ayɛ ahoroba hyɛ.
Anohoba Messiah (ANN) no ama hɛn nyimdzee nye nkyerɛkyerɛ a onnyi dɛ yɛyɛ biribiara a ͻmmfa pɛrpɛr kwan mu na ͻyɛ etsirmoͻdzen. Wͻ dɛm siantsir yi ntsi ohia dɛ yɛkan Anohoba Messiah (ANN) no nwoma no yie. Na ͻbɛboa hɛn wͻ Tabligh nye Taribiyyat nyinara mu. Hikmah so gyina hͻ ma botooyɛ na pintsiin gyina. Ahmadiyyafo afofor taa bisa kwan a wͻbɛfa do ayɛ hͻn ebusuafo nye hͻn adͻfo Tabligh. Sɛ hͻn abusuafo no bofuw a wͻnya abotar na wͻngyina pintsiin, na obinom nya adwensakyer wͻ pintsiin gyina mu. Mpo obinom tum kyerɛɛw me dɛ mber a wosie abotar wͻ hͻn busuanyi bi ho no, wͻama wͻabɛyɛ Bai’at. Hikmah a wͻaka no wͻ Kuran mu no, Arabik kasa nkyerɛmu no ka dɛ ogyina hͻ ma adze a oyi ekotoboyɛ fi hͻ. Hͻn a wͻyɛ Tabligh no, ͻwͻ dɛ wͻyɛ ahwɛyie dɛ mbrɛ ͻnnkema nsɛm a wͻbɛka no nnkopia nkorͻfo ma wͻnyɛ akotobofo. Ɔwͻ mu dɛ Maulwifo bi wͻ hͻ a hͻn akoma epirim na wͻbewu wͻ hͻn akotoobo mu naaso sɛ yɛdze abotar na nyansa kasa kyerɛ nkorͻfo wͻ hɛn nyimdzee gyinabew do a, hͻn akoma bɛyɛ mberɛw. mpo sɛ wͻanngye anntomu a, wͻnnyɛ etsiafo.
Akoma a otsia Nyamesom tum sesa yɛ mberɛw ma akotobofo gyae dɛ wͻbɛyɛ etsiafo. Nkorͻfo a wͻnngye Nyame nndzi pii baa Valencia aponto no ase. Hͻn mu kor a ͻbae nhyiamu no ase no bi kaa dɛ ne yamu a nkyɛ wͻkͻͻ do ara retsie Hadhrat Khalifatul Masih ne nsɛm a ͻdze roto gua no a ofi Kuran nye Hadis mu no. Kuran no mu nyansa dͻͻso ara a ma sɛ wͻdze nyansa yɛ no nkyerɛkyerɛ a odzi mu papa na ͻtͻ akoma do.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ siesie ara a wͻada Jama’at edzi wͻ Valencia yi, ͻwͻ dɛ dwumadzi a aka ekyir nyinara toa do wͻ kwan pa do. Hikmah so kyerɛ dɛ ͻwͻ dɛ ber biara nokwar da edzi. Islam yɛ nokwar som dɛm ntsi onnyi dɛ yɛyɛ biribiara a ͻnnyɛ pefee. Ulemafo a wͻka dɛ dzi ekohwi wͻ nyansakwan do no nnfa kwan mu. Osiandɛ beebiara a ekohwi wͻ no pɛrpɛr nnyi ho na ͻdze basabasayɛ na bͻn ba, na Islam so nnyɛ basabasa som. Ɔyɛ ahyɛdze kɛse da Ahmadiyyanyi biara do dɛ Nyankopͻn aka dɛ yɛnhyɛ Hikmah n’akadze mã. Dɛm ntsi hom mma hom nyimdzee na pɛrpɛryɛ nkͻ sor na hom nsua sɛ hom botum ahyɛ nkorͻfo suban nsew. Ɔyɛ adze son kɛse dɛ obi botum ahyɛ nkorͻfo su nsew na yɛrenntum nnyɛ Tabligh yie sɛ yɛkwatsir iyi a. Iyinom nyinara bɛboa hom na hom etu nkorͻfo fo wͻ kwan pa do. Iyi kyerɛ adze a ͻbɛma akoma ayɛ mberɛw. M’akyerɛ dza ͻbɛma akoma ayɛ mberɛw na wͻahyɛ Hikmah ma. Amanaman ahorow do mba na wͻwͻ ha, dɛm ntsi ͻbehia dɛ hom bɛfa nyansa kwan ahorow do bɛka Nyamesɛm.
Kuran kyerɛ hɛn bio dɛ yɛnfa kwanpa do nyɛ nsɛm ho mpɛnsampɛnsamu. Hɛn dze hɛn asodzi nye dɛ yɛbɛyɛ Tabligh na no nsunsuando no yɛ Nyankopͻn N’edwuma. Iyi ntsi na ohia kɛse dɛ yɛbɛsesa hɛn suban no. Anohoba Messiah (ANN) no kaa dɛ asɛm kor noara a sɛ efa kwan pa do ka kyerɛ obi a ͻbɛma wͻayɛ wo nyanko no, dɛm asɛm noara eka kyerɛ obi wͻ kwan bͻn do a, ͻbɛyɛ wo tamfo. Nyankopͻn aka dɛ mber nyinara hom nyiyi nsɛm ano wͻ kwan pa do. Iyi na Nyankopͻn afrɛ no Hikmah. Dɛ yɛbɛdua Hikmah do edzi dwuma biara yɛ adze hiadze ma hɛn ntamu nkitahodzi. Nyankopͻn N’adom ebuei Tabligh ama hɛn. Siesieara dze ohia ma hɛn dɛ yɛfa kwan pa do nya ho mfaso. Dawurbͻ nkrataa abͻ asɛm yi ho dawur na Khalifa so aka dɛ wͻyii Muslimfo edzi fii ͻman yi mu wͻ afe 1700 mu, afei na yɛresan aba ha bio. Hɛn botae renhyɛ mã wͻ dawurbͻ nkrataa no dawurbͻ mu kɛkɛ. Dawurbͻ nkrataa no bi so akasa afa mber a Khalifatul Masih a ͻtͻ do anan rebobuei Basharat Asͻrdan no wͻ Pedro Abad.
Na yɛrebisa dɛ ebɛn mpontu na yɛanya wͻ mfe eduasa a abɛsen kͻr no mu. Nkorͻfo a wͻpɛ dɛ wͻhyɛ hͻn botae mã no enyi nnge dɛ wͻabͻ hɛn nsɛm ho dawur ara kɛkɛ. Ɔwͻ dɛ yɛkͻ do ara yɛ nsusuho na nhyehyɛɛ a ͻbɛma yɛahyɛ hɛn botae mã. Nsɛmsɛm nketse nketse nnyi dɛ ͻsom hɛn Ahmadiyyafo bo koraa. Wͻrennhwehwɛ dɛ asɛm a Ameer Jama’at anaa Sadr Jama’at aka afa osimasi no ho. Mbom hͻn a wͻdze dɛm nsɛm yi ba no wobu hom dɛ wͻyɛ tootooba. Wͻka dɛ wͻage hɛn ber yi do Imam no edzi na wͻpɛ dɛ wͻma hͻn gyedzi hia hͻn sen wiadze yi mu biribiara. Ntawantawa nketsenketse yi bɛma hͻn werɛ efir hͻn botae no. Iyinom botum ama wͻdze mpaapaa mu aba ma asɛe hͻn wiadze yin ye hͻn ewie. Wͻka dɛ sɛ hɛn a wͻdze dɛm nsɛm nketse nktse yi kyima no wͻwͻ tsema ma hͻn anaa asͻr yi a, nkyɛ wͻnnkepaa nsɛm yi do akyerɛ obiara osiandɛ nsɛm a ͻtsetse dɛm nyinara yɛ anokumdzi nye anantsir twitwa. Sɛ yɛnya dɛm adwen pa yi a, ͻdze nsesa kɛse bɛba. Khuddamfo,Ansarfo nye Lajnafo nhwɛ dɛ wͻbɛyi dɛm nsɛm yi nyinara akwa ama wͻammfa ntawantawa nye mpaapaa mu ammba. Yɛsrɛ dɛ Nyankopͻn bɛma asͻrfi yi ayɛ nhyira wͻ akwan ahorow nyinara do.
Hadhrat Khalifatul Masih srɛɛ mpaabͻ maa onua bi a wͻabͻ no etur wͻ Nawab Shah, Pakistan. Ɔda ma ͻyɛ dzen, adatserfo na wͻbotum akyerɛ ndafu bi mu dɛ noho yie weifir owu gyinabew mu.